Ciidamo Gurmad ah oo loo diray Afhayeenkii hore Al Shabaab oo xaalad adag wajahaya * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ciidamo gurmad ah u direen Afhayeenkii hore ee kooxda Al Shabaab Sheekh Mukhaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) oo ku sugan deegaan katirsan gobolka Bakool.
Ciidamo Gurmad ah oo ka baxay magaalada Xudur ayaa lagu soo waramayaa in ay gaareen Deegaan ku dhaw halka uu ku sugan yahay Sheekh Mukhtaar Roobow , waxa ayna ciidanka ujeedkoodu yahay in gacan siiyaan kana difaacaan Al Shabaab
Dagaalyahano katirsan Al Shabaab ayaa hareereeyay deegaanka Abal oo qiyaastii 20-km u jirta magaalada Xudur halkaas uu ku sugan yahay Abuu Mansuur, waxaana deegaankaasi Abuu Mansuur ku difaacaya dagaalyahano ku heyb ah.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo wadahadalo kula jira Sheekh Mukhtaar Abuu Mansuur ayaa doonaya in culeeska milatari ka yareeyaan, waxa ayna ciidankan damacsan yihiin in ay soo galbiyaan Abuu Mansuur hadii ay isku fahmaan Wadahadalka u socda Abuu Mansuur iyo Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka shaqeenaya sidii dowlada Soomaaliya iyo Abuu Mansuur u wada hadli lahaayeen, waxa uuna Shariif u arkaa guul in Abuu Mansuur fikirkiisa uu badalo iskuna soo dhiibo dowlada.
Dowlada Mareykanka ayaa dhawaan liiska waxa loogu yeero Argagaxisada waxa ay ka saartay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali oo horey usoo noqday kuxigeenkii Amiirka Al Shbaaab iyo sidoo kale Afhayeenkii guud ee kooxdaasi.